Jimco, Bisha Afraad 29, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 06:42
War / Barnaamijyada Toddobaadka / Hambalyada iyo Heesaha
Hambalyada iyo Heesaha: Falastin iyo Danduray
Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha waxaa toddobaadka inala socodsiinaya Ibrahim Xasan Maxamuud (Danduray) iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Hore Hambalyada iyo Heesaha: Falastin iyo DandurayBarnaamijka Hambalyada iyo Heesaha waxaa toddobaadka inala socodsiinaya Ibrahim Xasan Maxamuud (Danduray) iyo Falastiin Axmed Iimaan
Dhageyso Hambalyada Iyo HeesahaDhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha oo aad xilliyadan oo kale dhageysataan. Ibraahim Xasan Daandurey iyo Falastiin Axmed Iimaan, ayaa si wada jir ah idin la socodsiinaya.
Dhageyso Hambalyada iyo HeesahaDhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha, oo aad xilliyadan oo kale dhageystaan. Maanta barnaamijka waxa idinla socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Dhageyso Hambalyada iyo HeesahaKu soo dhawaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha, oo aad xilliyadan oo kale dhageystaan. Barnaamijka maanta waxa la diyaar ah Ibraahim Xasan Daandurey iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Barnaamijka Hambalyada iyo HeesahaWaa barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha oo aad ku maqashaan waraaqadaha tahniyadaha dhalashada, nikaaxa iyo arooska. Sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhageysa taan heeso macaan.
Dhageyso Hambalyada iyo HeesahaBarnaamijka Hambalyada iyo Heesaha, oo maanta xiiso gaar ah leh, waxa idin la socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandurey iyo Falastiin Axmed Iimaan, ee dhageysi habboon.
Dhageyso Barnaamijka Hambalyada iyo HeesahaBarnaamijka Hambalyada iyo Heesaha, oo aad toddobaadkiiba xilliyadan oo kale dhageysataan waxa maanta idin la socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Dhageyso Barnaamijka Hambalyada & HeesahaBarnaamijka Hambalyada iyo Heesaha oo xiiso gaar ah leh, waxa si wada jir ah idin ku daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Dhageyso Hambalyada Iyo HeesahaDhageyso Barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha, oo maanta xiiso gaar ah leh,waxana si wada jir ah halkan idin kala socodsiinayaa Ibraahim Xasan Daandurey iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Dhageyso Barnaamijka Hambalyada & HeesahaBarnaamijka waxa toddobaadkan diyaar la ah Ibraahim Xasan Daandurey iyo Falastiin Axmed Iimaan ee dhageyi habboon.
Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Hore Xadad